Ezi 'zii-smartwatches' eziza kuhlaziya kwi-Android 8.0 Oreo | Iindaba zeGajethi
Nangona iyimarike apho iApple ilawula khona, kuyinyani oko Iindidi zee-Android Wear smartwatches zenza uluhlu olukhulu lwezinto onokukhetha kuzo. Mhlawumbi ezo zivakala kakhulu kuwe zezo zisayinwe yi-Motorola, ASUS okanye LG. Ngoku, ekubeni sisincedisi sefashoni, iimveliso ezaziwayo ezinje ngeFossil okanye uLouis Vuitton nazo zatsiba kwi-bandwagon ngeendlela ezahlukeneyo.
Njengakwiselfowuni kunye amacwecwe, iiwotshi phantsi kwenkqubo yokusebenza ye-Android Wear nayo ifumana uhlaziyo rhoqo, kunye neenguqulelo ezintsha. Y elandelayo eza kuvela iya kusekelwa kwi-Android 8.0 Oreo. Njengoko usazi kakuhle, ukuba ungumsebenzisi wayo nayiphi na le modeli, utshintsho alucaci njengakwamanye amaqela. Ewe kunjalo, ingxelo yokugqibela yeqonga ihlala yamkelekile.
Kwinguqulelo entsha, kulindeleke uphuculo kulwelo olusebenzayo, kunye nokuzinza kunye nokuphuculwa kwebhetri. Mhlawumbi eyona nto imangalisayo iya kuba nakho ukukhiya isikrini se smartwatch. Kwaye kukuba uninzi lwazo lunokuxhathisa ukuntywiliselwa phantsi kwamanzi. Kwaye ukuba isikrini siyasebenza, sinokubangela ukubakho kweqhosha ngengozi. uphando isungule uluhlu olusemthethweni lwamaqela anokuhlaziywa kwaye lawo aza kulinda. Apha sikushiya uluhlu olupheleleyo. Ewe kunjalo, kuya kubakho iimodeli ezihlala endleleni.
1 'Ii-Smartwatches' ezinokuhlaziya ngoku kwi-Android 8.0 Oreo
2 'IiSmartwatches' zilindele ukufumana i-Android 8.0 Oreo kwiiveki ezizayo
'Ii-Smartwatches' ezinokuhlaziya ngoku kwi-Android 8.0 Oreo
Ifosile Q Venture
LG Jonga umdlalo
'IiSmartwatches' zilindele ukufumana i-Android 8.0 Oreo kwiiveki ezizayo
I-Casio PRO TREK Smart WSD-F20
I-Casio WSD-F10 Ukujonga ngaphandle ngaphandle
Idizili yoLondolozo olupheleleyo
I-Emporio Armani Idityanisiwe
Ulawulo lweFossil Q
Umgubasi wezinto zakudala Q
Ifossil Q uMseki 2.0
Hugo BOSS BOSS Chukumisa
Nokia Jonga isimbo
UMichael Kors Ukufikelela kwiBradshaw
UMichael Kors Ukufikelela kuDylan
UMichael Kors Fikelela kwiGrayson
I-S & E yeMobvoi Ticwatch
I-TAG Heuer I-Tag edityanisiweyo yeModyuli 45
Njengoko ubonile, akukho zimodeli ze-Motorola okanye ze-ASUS ezikhoyo. Oku akuthethi ukuba abaqhubeki nokufumana uhlaziyo lokuphucula, kodwa kuya kufuneka bahlawulise i-Android 7.0.
Iinkcukacha ezithe vetshe: Uphando
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » Ezi 'zii-smartwatches' eziza kuhlaziya kwi-Android 8.0 Oreo